နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ ဒန္တ
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:04 PM
နိုင်းနိုင်းစနေ June 23, 2009 at 2:16 PM
နာတောင် သွားတစ်ချောင်း ပေါင် ၂ဝနဲ့ အံသွားနုတ်ခဲ့ရသေးတယ်း(
သွားကိုက်တာကို ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်လို့
Ko Boyz June 23, 2009 at 2:23 PM
ဟယ်...။ ကျောင်းပြေးကြီး...။ ကျောင်းလဲ မသွားပဲနဲ့ အွန်လိုင်းတက်နေတယ်။
သဘာဝက ပေးတဲ့ လက်ဆောင်မွန်ဟ။ နုတ်မပစ်ရဲဘူးဟာ...။
အတုက အစစ်လောက် မကောင်းဘူး။ အတု တစ်ချောင်း တပ်မယ်ဆို ဘေးနားက အစစ်နှစ်ချောင်းကို ကော်ပတ်စားပေးရတယ်တဲ့။ ဆိုတော့ ဘေးနားက အကောင်းနှစ်ချောင်းက ကြွေတွေ ပွန်းကုန်တာပေါ့ဟယ်။ ဖာတာ ပိုကောင်းမယ်။ ရန်ကုန်မှာ ရှယ်ဖါတာ ၃သိန်းလောက်ပဲ ကုန်တယ်တဲ့။ ကောင်းတယ်တဲ့။ ဒီတစ်ခေါက် ပြန်ရင် ဖါမယ်။
Unknown June 23, 2009 at 2:37 PM
အဲဒီသွားအကြောင်းလာမပြောနဲ့ NUH မှာသွားပြတာ နောက်ရက်မှ ရမယ်ဆိုလို့ boonlay မှာ အပြေးနှုတ်ပစ်ရတာ 135$တောင်။ ခုထိ သွားပြန်မစိုက်နိုင်သေးဘူး။ ::(
Unknown June 23, 2009 at 2:38 PM
ss ဆိုတာ စုဘူးအိမ် ပါ
Ko Boyz June 23, 2009 at 3:09 PM
အန်တီဂွိက သူတစ်ခါ သွားငိုပြတာ Walk in ကို ..။ အဲဒါ သူ့ကို နည်းနည်း စောင့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ နောက် ၁-၂ နာရီကြာတော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပေးတွေ့တယ်တဲ့။
အိုင့်ကိုလဲ အဲလို ငိုပြခိုင်းတာ အိုင်လဲ တစ်အား နာနေတဲ့ ပုံစံနဲ့ ရှုံ့မဲ့ပြတော့ ကောင်တာက မမကြီး လန့်သွားပြီး အားတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့ ချိတ်ပေးလိုက်တယ်။ နာရီဝက်တော့ စောင့်လိုက်ရတာပေါ့လေ။
ငိုတတ်ရင် မုန့်ကောင်းကောင်း စားရတယ်မှတ်ပါ ဂန်မလေး။
Unknown June 23, 2009 at 3:23 PM
အဲဒါက ကိုဘ က ယောက်ျားလေးကို မမ ကြီးက ဂရုစိုက်မှာပေါ့ 
Ko Boyz June 23, 2009 at 3:26 PM
ဟင်... အန်တီဂွိတုန်းကလဲ သူတို့ ဂရုစိုက်တာပါပဲ။
စုဗူးက ဘယ်လို သွားငိုပြတာလဲမှ မသိတာ ...
ခိခူအာနိုနေ့ လေး ဖြစ်အောင် မငိုဘူးလားအေ့...။
mae June 23, 2009 at 5:54 PM
ဇွန်ဇီကြော်ငြာ ဆိုတာ ဘာလဲဟင်?
အဲ့ဒါဆို ကိုဘ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး ပြတော့မှာပေါ့၊ ဗမာဆရာဝန်မဆီမှာ ဈေးသက်သာမလား မသိဘူး၊ မေးကြည့်ပါလား? တစ်နှစ်ပဲ ခံမယ်ဆိုတော့၊ တကယ်တော့ အံဆုံးပဲ၊ နှုတ်လိုက်လဲ မသေလောက်ပါဘူး.. အဲ.. သိပ်ပြသနာမရှိဘူး ပြောတာ
Ko Boyz June 23, 2009 at 5:57 PM
ဟင်... အံဆုံးက ကြိတ်ဝါးပေးရတာလေ...။
၀ါးစရာ မရှိရင် ဘာနဲ့ သွားဝါးမှာလဲ...။
မြန်မာဆရာဝန်မဆီတော့ အားမှ သေချာ ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်၊ လူကိုယ်တိုင် ဖြစ်ဖြစ် သွားမေးမယ်။
အခုက ခရီးများနေဆဲ ကာလဖြစ်နေလို့ ယာယီ အကိုက်အခဲ ပျောက်အောင် ကုထားတာ..။
:P June 23, 2009 at 7:44 PM
ပါးချိတ်ကို လက်သီးနဲ့ အသားကုန် လာထိုးပေးချင်ထှာ... ခံစားနေရတာ မကြည့်ရက်လွန်းလို့ပါ။
အံဆုံးက သိပ်အသုံးဝင်တဲ့ သွားထဲ မပါဘူးထင်ပါတယ် ကိုဘရယ်....။
တို့မှာ အံဆုံး တစ်ချောင်းပဲပေါက်သေးတယ်...။ ဒါတောင် မကြာသေးဘူး...။
သွား 28 ချောငိးနဲ့နေလာတာ နှစ် 30 ကျော်ကြာရော့....။
Ko Boyz June 23, 2009 at 8:42 PM
တို့ခဲ ၂၈ ချောင်းပါပဲ။ ၂၇ ချောင်းနဲ့ မ၀ါးတတ်လို့ပါ ဆင်ဆင်ရယ်...။ အသစ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အဟောင်းကို မမှီလို့ပါ...။
:P June 23, 2009 at 9:08 PM
သြော်... ဒါဆို ကိုဘ ကိုက်တဲ့သွားက အံဆုံးမှ မဟုတ်တာ..
အဲဒါ အံသွားပဲ...၊ ဒါဆိုရင်တော့ မနှုတ်ပဲဖြစ်ရင် မနှုတ်သင့်ပါဘူး...
ဒါမှ မဟုတ် ဒေါက်တာညဏ်နဲ့ မဝါ စင်ကာပူကို သြဂုတ်လလာမယ်တဲ့.. ဘလော့ဂါတွေကို ထုံဆေးမထိုးပဲ သွားတစ်ချောင်းစီ အလကားနှုတ်ပေးမယ်ပြောတယ်၊ အဲဒါစောင့်ချင်စောင့်ပေါ့....။ :P
Ko Boyz June 23, 2009 at 9:09 PM
သူ့စေတနာကို နည်းနည်း သံသယ ရှိနေတယ်...။
mae June 23, 2009 at 9:13 PM
အင်းလေ.. ကိုဘက အံဆုံးပြောတာကိုး၊ အံသွားပြောပါလား၊ အံဆုံးက ဟိုးနောက်မှာ .. ဝါးတဲ့အခါမှ မသုံးပဲ၊
ဇွန်ဇီကြော်ငြာ ဆိုတာ ဘာလဲလို့ မေးနေတာ....
Ko Boyz June 23, 2009 at 9:16 PM
ဟယ်။ ဒုတိယ အံဆုံးလို့ ပြောနေတယ်လေ...။ ဒုတိယ ဆိုတာ ပါတယ်လေကွယ်..။
ဇွန်ဇီကြော်ငြာက ခိုင်သင်းကြည်ရယ်လို့ လူသိများစေခဲ့တဲ့ ကြော်ငြာပါ။ လိမ္မောါရောင် အပေါ်အောက် ၀မ်းဆက် ဘောင်းဘီဝတ်လို့ ကင်မရာကို ကျောပေးပြီး သူ့တင်ကို လှုပ်ပြတာ ကိုကိုဘွိုင်းတို့ အဲဒီတုန်းက နှလုံးတုန်၊ ရင်တုန်သွားတယ်။
မီးမီးချစ် June 23, 2009 at 9:31 PM
ကိုဘွိုင်း က အရင်က ဇွန်စီ ကိုတောင် ရင်တုန်တယ်...
ခုတော့ ပေါက်စီ ကိုတောင် မဖြုံတော့ ဘူးပေါ့လေ...း))
ဒါဆိုသွားက ခုဆို နှစ်ချောင်းတောင်သေသွားတာပေါ့..
Ko Boyz June 23, 2009 at 9:33 PM
အခုဆို ၂၆ ချောင်းပဲ အလုပ်လုပ်တော့တယ်။
ဇွန်ဇီတုန်းက တားက ငယ်သေးတယ်လေ...။ ခွီးခွီး...။
khin oo may June 24, 2009 at 12:04 AM
ကိုလူထွေး June 24, 2009 at 3:29 AM
သွားကိုက်နေလား... သွားနာနေလား... သွားနှုတ်ချင်လား...
NangNyi June 24, 2009 at 11:45 AM
Ko Boyz June 24, 2009 at 5:24 PM
ဆင်ဆင်က အာဂလူထင်တယ်နော်...။ မွေးကတည်းက သွားက ၂၈ ချောင်းစလုံးပါလာတယ် ထင်တယ်။ သွား ၂၈ ချောင်းနဲ့ နေလာတာ နှစ် ၃၀ ကျော်ကြာပြီ ဆိုပဲ...။ တို့များတောင် ဘယ်နှစ်နှစ်သားလဲ မသိ.. နောက်က အံသွားတွေ ပေါက်လာတာ။
Ko Boyz June 24, 2009 at 5:25 PM
ကလူထွင်း - ထုံဆေးမပါပဲ နှုတ်မယ့်သူဆို လုံးဝ မသွားပါ။
နန်းညီ - မလှောင်ပါနဲ့။ လှောင်ရင် အဖမ်းခံရပါလမ့်မယ်။ (ဓါတ်ဆီ)
mae June 24, 2009 at 6:06 PM
ခိုင်သင်းကြည်ကို မြင်ယောင်ကြည့်တာ censor သိပ်မလွတ်သလိုပဲ၊ ..